पत्रकार पुरुषोत्तम ढकालको टेलिभिजन ‘शो’ अमेरिकन जर्नीको साथमा बाल्टिमोरका अगुवा नेपाली अमेरिकन डा. श्याम कार्की - Enepalese.com
पत्रकार पुरुषोत्तम ढकालको टेलिभिजन ‘शो’ अमेरिकन जर्नीको साथमा बाल्टिमोरका अगुवा नेपाली अमेरिकन डा. श्याम कार्की
इनेप्लिज २०७२ साउन १९ गते १६:३९ मा प्रकाशित
पत्रकार पुरुषोत्तम ढकालको चर्चित टेलिभिजन ‘शो’ अमेरिकन जर्नीको साथमा बाल्टिमोरका अगुवा नेपाली अमेरिकन डा. श्याम कार्कीको विश्लेषण: कता जाँदै छ अमेरिकामा नेपाली समाज ? एनआरएन र एएनएले नेपाली अमेरिकनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको डा. कार्कीको भनाइ, नेपाली अमेरीकनको बृहत्तर हित र मूल प्रवाहको सामाजिकीकरणको लागि नयाँ संगठनको आवश्यकता … नेपाली अमेरिकनको साझा प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास टेलिभिजन ‘शो’ अमेरिकन जर्नी ।